Thank you for your interest in our schools! We value your call and in order to serve you better and faster please provide us with the following information. Brainworks-Total/MMIS/Taunggyi International schools set very high standards in data privacy and confidentiality and hence all the information are safe and will not be used for any other purpose.
လူကြီးမင်းတို့အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရန် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးစေလိုပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ Brainworks-Total/MMIS/Taunggyi ကျောင်းအား ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီး အခြားမည်သည့်အကြောင်း အရာနှင့်မှ မျှဝေ သုံးစွဲခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။
Branch || မိမိနှင့် နီးစပ်သော ကျောင်းခွဲကို ရွေးချယ်ပါ။ -Select- Brainworks K12 Integrated Total Leaning Academy Taunggyi International My Myanmar International School
Grade level you are looking for admission || မည်သည့်အတန်း/ level များကို ကျောင်းအပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသနည်း။:
Pre-school ( မူကြို )
Primary ( မူလတန်း )
Secondary (အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း )
Wise ( Weekend Integrated School for English ) စနေ၊ တနင်္ဂနွေ weekend အတန်းများ
Full name of the Parent / caretaker || မိဘ / အုပ်ထိန်းသူ၏နာမည်အပြည့်အစုံ*
Email address || အီးမေးလ်လိပ်စာာ*
Telephone with country code || သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တယ်လီဖုန်း ကုဒ်နံပါတ် *
Township / City presently living || လက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသော မြို့နယ်၊ မြို့
What relationship you have with the child / children you are looking for admission || ကျောင်းအပ်နှံရန် ရည်ရွယ်ထားသောကလေးနှင့် မည်သို့ တော်စပ်ပါသနည်း ။ -Select- Father || ဖခင် Mother || အမေ Guardian || အုပ်ထိန်းသူ
Do you have Social Media Contact? || လူမှုကွန်ယက် များမှ တဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်မှု*
How do you know about us? || Brainworks ကျောင်းကို မည်ကဲ့သို့ သိရှိခဲ့ သနည် -Select- School website Facebook pages Billboards Friends Brainworks’ students and their parents Walk-in
For how many children you are looking for admission || ကျောင်းအပ်နှံရန် ရည်ရွယ် ထားသော ကလေး ဦးရေ -Select- 12345
What is your best experience in your child’s / children's last school(s) || လူကြီးမင်း၏ ကလေးနောက်ဆုံး တက်ရောက်ခဲ့ သော ကျောင်းတွင် လူကြီးမင်းရရှိခဲ့သော အကောင်းဆုံး အတွေ့အကြုံ
Would you like to share obstacles if any, you have faced with your child's / children's past school(s)? || လူကြီးမင်းတို့ ၏ ကလေးယခင်တက်ရောက်ခဲ့သော ကျောင်းများနှင့် ပတ်သက် ၍ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော အခက်အခဲ များကို မျှဝေလိုပါသလား
Will you share your expectation, if any, from Brainworks-Total/MMIS/Taunggyi International schools:|| Brainworks-Total/MMIS/Taunggyi ကျောင်း အပေါ် လူ့ကြီးမင်း တို့ ၏ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ပတ်သက် ၍ မျှဝေလိုပါသလား
Are you the main fee paying sponsor of the child's education || လူကြီးမင်းသည် ကလေး ပညာရေး အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို အဓိက တာဝန်ယူမည့်သူ ဟုတ်ပါသလား Yes
Your annual income || လူကြီးမင်း ၏ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ -Select- US $0to 24000 US $ 24000 to 60000 US $ 60000 and above
Do you have financial resources to support your child’s education based on the current school fees and for the long term? || လူကြီးမင်းအနေဖြင့် မိမိရင်သွေး ပညာရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုး ပေးနိုင်ရန် ဘဏ္ဍာရေး အင်အားနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများရှိပါသလား? Yes No
What is the best time to reach you out through phone? || လူကြီးမင်းကို အကောင်းဆုံးဆက်သွယ်မှုပြုလုပ် နိုင်မည့်အချိန်?
Are you sure you want to submit your query?